विश्वमै नघ’टेको आश्चर्य चकित पार्ने घ’टना ! २० जना भुतसंग शा’रीरिक सम्बन्ध राख्ने यी युवती, भुतकै बच्चा जन्माउने चाहना (उनिसंगको भिडियो) – SUDUR MEDIA
जानकारी भिडियो रोचक समाज
March 29, 2021 March 29, 2021 AdminLeaveaComment on विश्वमै नघ’टेको आश्चर्य चकित पार्ने घ’टना ! २० जना भुतसंग शा’रीरिक सम्बन्ध राख्ने यी युवती, भुतकै बच्चा जन्माउने चाहना (उनिसंगको भिडियो)
एजेन्सी । दुनियालाई नै चकित पार्ने घ’टना इंग्ल्यान्डमा घटेको छ । २१ औ शताब्दीमा भुत हुदैन भन्नेहरुलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । घट’ना हो इंग्ल्यान्ड ब्रिस्टोलको । २७ बर्षीय अमेथि राइमले दुनियालाई चकित पार्ने घट’नाको सनसनी खुलासा गरेकी छिन।
उनले कम्तिमा पनि २० जना भुतहरुसंग से .क्स गरेको भन्दै सनसनीपूर्ण दाबी गरेकी छिन । एक ब्रिटिश ईटिभी शोमा उनले यो खुलासा गरेकी हुन् । करिब १२ बर्ष पहिले उनीहरु नया घर किनेर सरेपछि उक्त घरमा अनौठो खालको दृश्यले उनको शरीरमा छोएको महसुस हुन थाल्यो ।
जसले छुदा यौ .न इच्छा जगाउथ्यो जसले शरीरमा आएको आनौठो शक्तिले बिस्तारै शरीरमा छुदै से. क्स गर्ने गर्दथ्यो । उनले भनिन मैले भुत संग से. क्स गरे ! अनि के तपाईले अनुभव गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन यसलाई म कसरी व्यक्त गर्नु बताउन धेरै गारो छ । केहि अदृश्य अद्भुद चिजले शरीर छोए जस्तो केहि गह्रौ भए जस्तो र केहि शक्ति आए जस्तो हुन्थ्यो । जुन भुतले तीन बर्ष सम्म से. क्स गर्यो ।
त्यसपछि उनले बिवाह गरिन र उनको श्रीमान काम बाट फर्किदा झ्यालबाट छाया देख्ने गर्थिन । तर अमेथि राइम ति भुतहरु रमाइलो गर्थिन खेल्थिन । उनको २० जना भुतहरु यौ. न पार्टनर थिए । उनले ति भुतहरु बाटै आफु बच्चा जन्माउन चाहना राखेकी छिन् । तर के यो सम्भव होला त ? उनले रिसर्च गर्दै छिन । विभिन्न असाधारण अ.नुसन्धानविदहरुले यसलाई अनौठो र असाधारण बताएका छन् । यद्धपि अ नुसन्धान गर्दै छन् ।
होली खेल्ने क्रममा बाग्लुङका दुई समुह बीच यसरी भएको थियो झ.डप,’ दुईको मृ’त्यु र अन्य १३ जना वेपत्ता ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
साप्ताहिक रा’शिफल हे’र्नुहोस : चैत्र १५ गते आईतबारदेखी चैत्र २१ गते शनिबारसम्मको